E-News Nepali || Fast and Accuracy » कञ्चनपुरमा रमिताको मृ त्युपछि भागी विवाह गरेका प्रकासको पीडाः बिचमै छोडेर किन गयौ ?
कञ्चनपुरमा रमिताको मृ त्युपछि भागी विवाह गरेका प्रकासको पीडाः बिचमै छोडेर किन गयौ ?
महेन्द्रनगर – डेढ बर्ष अगाडी मात्रै कञ्चनपुरका प्रकास टेर र बैतडीको गुरुखोला घर भई कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका गोवरीया बस्दै आएकी रमिता भट्ट (रोशनी) ले भागी विवाह गरेका थिए। भागी विवाह गरेपनि दुवै पक्षको परिवारलाई सहमतीमा ल्याउन प्रकास र रमितालाई सहज थिएन्।
जस्का कारण रमिताले प्रकासको नामको सिन्दुर समेत हाल्न सकेकी थिईनन्। भागी विवाहको डेढ बर्षपछि दुवै परिवारको सहमतीमै माघ १३ गते विवाह गर्ने निधो भयो। प्रकास र रमिताको सबैभन्दा खुसीको दिन पनि नजिकै आईरहेको थियो। उनीहरु दुवै विवाहको तयारीमा जुटेका थिए।
तर बुधवार आफ्नै विवाहको कार्ड बाडिरहेकी रमितालाई कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ महेन्द्रनगर चम्मन चोकमा से १ क ८८७ नम्बरको टिप्परले ठक्कर दियो। टिप्परले ठक्कर दिएपछि उनी घटनास्थलमै सधैका लागि अस्ताईन्। यो घटनाले रमितासंग भागी विवाह गरेका प्रकास टेर अहिले सबैभन्दा पीडामा छन्।
उनले आफ्नो पीडा फेसवुकमा पोख्दै लेखेका छन्, ‘तेरो लागि साडी ल्याईदिएको छु बुढी,पर्सि हाम्रो विवाह हो। का छस छिटो आइजा। उनले अगाडी लेखेका छन्, ‘मेरै लागि परिवार सहित सवथोक त्याग्यौ तर मलाई बिचमै किन छोडेर गयौ। मैले यति लामो बाटो एक्दै कसरी हिड्ने?’ रमिताको मृ त्युपछि अहिले दुवै पक्षको परिवार शोकमा डुवेको छ। स्थानीयले बुधरवा राती सम्म महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए। अहिले रमिताको शव पोष्टमार्टमको लागि महाकाली अस्पतालमा राखिएको छ।
प्रकाशित मिति ११ माघ २०७६, शनिबार ०३:५९
बधाई गौरिका ! फोर्ब्सको ३० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा नेपालकी जलपरी गौरिका सिंह
अन्ततः यही बैशाख ९ गते देखि एक साताका लागि लकडाउन गर्ने प्रसासनको निर्णय